BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal - Yaa Soomaaliya uga qeybgalaya?
Yaa Soomaaliya uga qeybgalaya?
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 11 Luulyo, 2012, 16:13 GMT 19:13 SGA
Cayaaraha Olombikada ee London 2012
Tuulada cayaaraha Olombikada ay ka dhici doonaan
Magaalada London waxaa 27 ka bishan July ka furmaya cayaaraha Olombikada adduunka oo ay ka qabgalayaan in ka badan 200 oo waddan.
Shalay waxa dalalka ugu horreeya ee soo gaaray London la tusayay kooxaha kala duwan ee ka socda goobaha ay degi doonaan inta cayaaruhu socdaan.
Waxaa ku jiray haddaba dalalkaasi Soomaaliya oo shalay la tusay halka ay kooxdoodu degi doonto.
Haddaba ka wareystay inta cayaaryahan ee dalka Soomaaliya uga qeybgalaysa cayaaraha olombikada adduunka ee London iyo rajadoodu sida ay tahay ayaa Farxaan Maxamed Jimcaale waxa uu ka warreystay Ku simaha guddoomiyaha olombikada Soomaaliyeed Durraan Axmed Faarax.